Uvule icala 'oshaywe yisesheli'
UNKSZ Zama Mgagula othi ushaywe ngowesilisa obemeshela Isithombe: MBALI KHANYILE
UVULE icala owesifazane waseThekwini othi ubhaxwe wumlisa angamazi ngoba enqabe ukumnaka ngesikhathi emshela.
Lo wesifazane uthi ubehamba nozakwabo bejahe ukuyogibela itekisi bephuma emsebenzini.
UNksz Zama Mgagula (23) uthi lesi sigameko senzeke ngoLwesithathu ntambama kuyoshaya ihora lesine eCarrington Heights, eMbilo eqeda kushayisa emsebenzini ehamba nozakwabo.
Elandisa ngokuhlukumezeka kwakhe, uthe bebehamba emgwaqweni uRiver Drive, eMbilo kwaqhamuka iNavara eyi 4x4 empunga ihamba abalisa ababili yafike yama eceleni kwabo.
“Kuthe uma le moto isifica, yama eduzane kwethu basikhulumisa laba balisa beshela kodwa sakhombisa ukuthi kasinawo umdlandla wale nto abebeyenza ngoba besijahe itekisi.
“Kuthe uma bebona ukuthi asiyingeni eyokubalalela, waphuma umlisa obehlezi eduze komshayeli.
“Uthe uma ephuma wadedela isibhaxu kimina ebuza ukuthi kungani ngizenza ngcono ngoba angimuhle, ngesikhathi engishaya ngibe sengizama nami ukuzivikela ngithi ngiyaphindisela kanti ngiyaziyala waqinisa isandla,” kubeka le ntokazi ebivuvukele ohlangothni lwesokudla neso layo libomvu.
Ithe isola ukuthi isizwe wukuba khona kwengane ebihlezi ngemuva emotweni obekubonakala ukuthi bebeyilande esikoleni ngoba ibisafake umfaniswano. Uthe ngesikhathi kwenzeka konke lokhu umshayeli wemoto, ubezihlalele nje emotweni sengathi akonakele lutho. Obehamba nomgilwa ukwazile ukuthatha izinombolo zemoto abebehamba ngayo abalisa.
“Okunye okungithene amandla yindlela engiphatheke ngayo esiteshini samaphoyisa ngesikhathi ngiyovula icala, iphoyisa lesifazane engifikele kulona lingibuza ukuthi ngifisa kwenzekeni njengoba bengiyocela ukuvula icala. Yize ngigcine ngivulelwe icala kodwa kuke kwaba nemibuzo nje engishiye ngizibuza ukuthi kanti ngempela umuntu wesifazane yini okumele ayenze uma ehlukunyezwa ngumuntu wesilisa,” kuzikhalela uNksz Mgagula.
Eqhuba uthe usanovalo namanje njengoba esazohamba kuwo lo mgwaqo okwenzeke kuwo lesi sigameko.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni, uCaptain Nqobile Gwala ukuqinisekisile ukuvulwa kwecala esiteshini samaphoyisa aseMbilo. “ Amaphoyisa aphenya icala lokushaya.”